IBitcoin isivele isemthethweni e-El Salvador futhi iba yizwe lokuqala ukuyivuma njengethenda elisemthethweni | Kusuka kuLinux
Okuhle | 09/06/2021 18:54 | Kubuyekezwe ku- 10/06/2021 01:58 | Izaziso
Namuhla uJuni 9, 2021 ube usuku olubaluleke kakhulu lweBitcoin, kusukela Umthethosivivinywa kaMongameli wase-El Salvador uNayib Bukele wamukelwa yiCongress yezwe enamavoti angama-62 kwangu-84. Ngalokhu, i-El Salvador iba yizwe lokuqala ukushaya umthetho oguqula iBitcoin ibe yithenda elisemthethweni.
Futhi kungukuthi muva nje sikhulume ngayo lapha kubhulogi futhi umongameli waseSalvador ufuna amandla ku-bitcoin ukuxazulula izinkinga eziningi zezomnotho nezenhlalo zezwe, Yebo, ngesikhathi somhlangano weBitcoin 2021, uMongameli uNayib Bukele umemezele ukuthi kulungiswa umthethosivivinywa weCongress ozokwenza iBitcoin imali yezomthetho ezweni futhi kwaba njalo.
"Injongo yalo mthetho ukwenziwa kwe-bitcoin njengethenda elisemthethweni, elingavinjelwe ukulanda, elingenamkhawulo kunoma yikuphi ukuthengiselana", singafunda esihlokweni sokuqala sombhalo manje esidinga kuphela ukuqinisekiswa yiNhloko Yezwe ngemuva kwephrojekthi .
UBukele uphakamise amandla emali edijithali ukuvumela abaseSalvador ababencishwe amathuba kakhulu ukufinyelela ohlelweni lwezezimali olusemthethweni, basize abantu baseSalvador abahlala phesheya ukuthi bathumele imali ekhaya kalula, futhi bakwazi ukuvula amathuba emisebenzi.
"Esikhathini esifushane, lokhu kuzodala amathuba emisebenzi futhi kusize ukuhlinzekela ukufakelwa kwezimali izinkulungwane zabantu abangaphandle komnotho osemthethweni," kusho uBukele kuvidiyo yakhe.
Ngokusho kweminye imithombo, i-El Salvador yizwe elinomnotho okhiqiza kakhulu imali, lapho cishe abantu abangama-70% bengenayo i-akhawunti yasebhange noma ikhadi lesikweletu.
UMongameli waseSalvador Uyaqiniseka yokwenza ithenda elisemthethweni le-bitcoin izoxazulula izinkinga eziningi zezomnotho nezenhlalo zezwe.
“Izothuthukisa izimpilo nekusasa lezigidi zabantu,” kusho uBukele.
Ngenkathi uBukele ejabule ngomsebenzi wakhe, abanye bakhathazekile ngezinto ezifana nokungazinzi ye-bitcoin nokuphazamiseka okungayifaka ohlelweni lwezezimali lwanamuhla.
Njengoba isibonelo esicacile sidlula isikhathi sezinyanga ezintathu, kusukela ngo-Okthoba 2017 kuya kuJanuwari 2018, isibonelo, ukungazinzi kwamanani we-bitcoin kufinyelele cishe ku-8%. Lokhu kungaphezu kokuphindwe kabili kokuguquguquka kwe-bitcoin ngesikhathi sezinsuku ezingama-30 esiphela ngoJanuwari 15, 2020.
Nokho, abahlaziyi bathi ukusetshenziswa kwe-bitcoin njengemali yamazwe asathuthuka njengamanje ebhekene nokwehla kwamandla emali okuphezulu kuyajabulisa uma ubheka ukungaguquguquki kwe-bitcoin kule minotho uma kuqhathaniswa nokungazinzi kwe-bitcoin ku-USD (okwamanje imali yokuhweba yamazwe omhlaba).
Ngenxa yalokhu, abanye osomnotho babona iBitcoin njengendawo yokugcina ephephile noma indawo ephephile, Kusukela yaqala ukwethulwa, i-bitcoin ichazwe njengendawo ephephile, futhi abahlaziyi abaningana nezincwadi bazama ukwenza kanjalo ngokusekelwe kuphela kwimininingwane yemakethe.
Yize lokhu kusebenza kahle kwimpahla nempahla enokuphila isikhathi eside emakethe, i-bitcoin enye indlela ilungile. Muva nje imibiko iveze ukuthi i-Iran ibiyisebenzisa ukunqanda izithiyo emnothweni wayo.
Kepha ezinye izazi ziphikisana nalo mbono. Ngokusho kwabo, i-bitcoin ishintsha kakhulu, ingamanzi futhi ibiza kakhulu ukuhweba (ngokwesikhathi nezindleko) kunezinye izimpahla (kufaka phakathi igolide, indawo ephephile yendabuko), noma ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zemakethe. Kuze kuvuthwe imakethe, kungaba yingozi ukubuka iBitcoin njengendawo ephephile.
Ukwengeza kulokhu kukhathazeka udaba lokusetshenziswa kwamandla kagesi., eqhubeka ikhula minyaka yonke. Njengamanje, i-bitcoin isebenzisa amandla kagesi amaningi kune-Argentina. Lesi ngesinye seziphetho zokuhlaziywa yiCentre for Alternative Finance eNyuvesi yaseCambridge eyashicilelwa ngoFebhuwari odlule. Nakhu okunye ukulinganiselwa kokusetshenziswa kwamandla kwenethiwekhi eyaziwayo yokuxhaswa kwe-cryptocurrency ku-1% yalowo womhlaba wonke. Ngakho-ke ochwepheshe besimo sezulu baxwayisa ngokuthi ukwamukelwa okubanzi kwe-bitcoin kungaholela ezinxushunxushwini zamandla.
Okwamanje, isinyathelo sika-El Salvador siyindaba eseceleni, ngoba yize ukusetshenziswa kwe-bitcoin kugunyaziwe emazweni amaningana emhlabeni jikelele, akekho noyedwa kubo osethathe isinyathelo sokubhalisa imali ngokusemthethweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » IBitcoin isivele isemthethweni e-El Salvador futhi iba yizwe lokuqala ukuyivuma njengethenda elisemthethweni
I-OpenProject: Uhlobo olusha 11.3.1 lwe-Project Management Software